Home > Tikidhada Jaban ee SNCB Iyo Qiimaha Safarka
SNCB waxay bixisaa adeegyada tareenka gudaha Biljimka iyo guud ahaan Yurub. Iyada oo leh tigidh sax ah, you can visit all the best meelaha fasaxa ee Yurub. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo tigidhada ah iyo kaararka rukhsaynta, SNCB waxay daboolaysaa baahida qof walba.
Tareenadu waxay soo noqnoqdaan Brussels – Ghent, Antwerp – used, Brussels – Namuur. Waxaad sidoo kale aadi kartaa wadamada deriska la ah Yurub gudaheeda adoo adeegsanaya tareenada SNCB.
Qiimaha SNCB train tickets kici markay maalinta safarku soo dhowaanayso. Waxaad naftaada ku badbaadin kartaa xoogaa lacag ah adiga oo jaale tikidhadaada tareenka ee SNCB inta ugu macquulsan laga bilaabo maalinta bixitaanka. Tikidhada tareenka ee SNCB ayaa la heli karaa goor hore 3 si ay u 6 bilood ka hor bixitaanka tareenka. Boos sii qabsashada hore waxay xaqiijineysaa inaad hesho tikidhada tareenka ee SNCB ugu kharash-badan. Iyaguna tiro ahaan way xadidan yihiin, markaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dalbato, ka jaban adiga. Si aad lacag ugu keydiso tikidhada tareenka ee SNCB, iibso tigidhadaada ASAP.
Tareennada SNCB ayaa baahi weyn loo qabaa, iyo tartan yar, waxay wali yihiin xulashada ugu sareysa ee tareenada Beljam. SNCB way awoodi kartaa inay dejiso xayiraadaha tikidhada tareenka sida midka ay iyagu leeyihiin oo mamnuucaya tigidhka is-weydaarsiga ama soo celinta illaa ay tahay nooca ganacsiga ee tikidhada. In kasta oo ay wali jiraan degello internet oo aad ku iibin karto tikidhadaada gacanta labaad dadka, SNCB ma ogolaaneyso iibinta tigidhka gacanta labaad. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga keliya markaad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad hal tikit laba jeer dhigto maxaa yeelay wax baa soo baxay oo ma isticmaali kartid tigidhka asalka ahaa..
Badbaadinta Tareenka ayaa leh kan ugu weyn, ugu fiican, iyo heshiisyada ugu jaban tikidhada tareenka ee Yurub. Xiriirka aan la leenahay dad badan oo ka shaqeeya tareennada, ilaha tikidhada tareenka, iyo aqoonta aan u leenahay algorithms-ka tikniyoolajiyadda waxay siinaysaa Badbaadinta A Tareenka heshiisyada tikidhada tareenka ugu jaban. Kaliya kuma bixinno heshiisyada tikidhada tareenka ee jaban SNCB oo keliya; waxaan si isku mid ah u siineynaa beddelka kale ee SNCB waxaanna ku faaneynaa adeegga macaamiisha ugu fiican suuqa tareenka.
Muwaadiniinta reer Belgium, waxaa jira noocyo kala duwan oo rukumo ah, tigidhka Xilliga aan Xaddidnayn, iyo Xilliga Jaangooyada. Wixii caalami ah waxaan kuu soo jeedineynaa inaad waqti hore iibsato ka hor waxaadna heli doontaa ikhtiyaarka ugu jaban.
Tareennada SNCB waxay ka ambabaxayaan magaalada Ghent Ghent Saint Pieters Idaacadda, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
Liege, Liege Guillemins waa xarunta dhexe ee tareenka ee SNCB. Sidaa darteed, Saldhiga tareenka ee Liege wuxuu isku xiraa Beljamka iyo wadamada deriska ah, making it one of the busiest train stations in Wallonia. Waxaa intaa dheer, haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Jarmalka, France, Luxembourg, ama Nederland ka timid Biljim, waxaad sifiican uheli laheyd tikidhadaada tareenka ee SNCB sifiican kahor.
used (Baaruud – Isla magaca magaalada oo ku qoran luqad kale oo caan ah) tareenka waa xarun kale oo mashquul SNCB ah oo ku taal Flanders. Tusaale ahaan, ka yimid Bruges, waxaad dalban kartaa tigidhka tareenkaaga mid kale meelaha caanka ah gudaha Belgium: Ghent, Antwerp, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is at a 20 daqiiqo’ masaafada socodka ka faras magaalaha, iyo fagaaraha quruxda badan ee Old City Markt.
Waxaad karaa keyd a waan ogahayat ka hor on domestic SNCB tareenada. Waxaad doono get a personal kursi ka dib markii la sii qabsado, laakiin tani maahan qasab.
No. Ma jiro Free Wi-Fi internetka tareenada SNCB. Waxaad ku raaxeysan kartaa Wi-Fi bilaash ah saldhigyada tareenka ee SNCB.